Wararka - Adkee xoogga gudaha oo dhoof ka dhig - Shandong Gaoqiang wuxuu si guul leh u qabtay shirkii tababarka farsamada
Wakiilka yareynta biyaha ee SNF
SNF (Naphthalene based) wakiilka yareynta biyaha waxaa badanaa loo gudbiyaa β-Naphthalene Sulphonate Formaldehyde Condensate (magac gaaban: SNF, PNS, NSF, iwm…). Waa wakiilka ugu weyn uguna balaaran ee biyaha yareeya Shiinaha ee hadda (≥ 70%). Waxaa lagu gartaa heerka yareynta biyaha sare (15% - 25%), majiro hawo hawo, saameyn yar oo waqtiga dejinta, la qabsashada wanaagsan ee sibidhka, isticmaalka isku dhafka ah ee lagu daro waxyaabo kale iyo qiimo yar. SNF waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa in lagu diyaariyo dheecaan sare, xoog sare iyo waxqabad sare oo la taaban karo. Khasaaraha burburka ee la taaban karo ee lagu daro fudud ee SNF ayaa ka dhakhso badan. Intaa waxaa dheer, la qabsiga SNF qaar ka mid ah sibidhka ayaa loo baahan yahay in la hagaajiyo.
Maamulaha guud ee shirkadda, Zhu Menshou, oo ay weheliyaan shaqaalaha ka qeyb galaya kulanka, ayaa si diirran u soo dhoweeyay Dr. Gao. Zhu wuxuu tilmaamay markii uu dillaacay cudurka, in qaabkii weynaa ee kaabayaasha dhaqaalaha la furay, shirkaddu waxay keentay fursado horumarineed hal mar-nololeed, fursadahana had iyo jeer waa loo qoondeeyay kuwa loo diyaar garoobay. Shirkaddu waa inay si firfircoon u sahamiso hal-abuurka moodeellada ganacsiga, oo ay si joogto ah u cusboonaysiiso alaabada iyo moodellada adeegga. Kaliya iyada oo si joogto ah wax loo barto, lagu dabaqo waxa ay barteen, si joogto ah loo abuuro faa'iidooyin tartan, iyo dhisida kooxo hufan, shirkaddu waxay sii ahaan kartaa mid aan laga adkaan karin.
Kulanku, Dr Gao wuxuu sameeyay khamriga poly carboxylic acid hooyadiis iyo astaamaha ay ku shaqeyneyso iyo qeybinta farsamada xakamaynta, tababarka farsamada, wuxuu sharaxay PCE-ga hooyada khamriga leh astaamaha qaybinta walxaha iyo iskudhafka tixgelinta, PCE iyo qeybaha ay shaqeyneyso oo ku saabsan sifooyinka sharciyeynta la taaban karo, isku darka codsiyada la taaban karo inta badan aqoonta sida dhibaatooyinka iyo ka hortagga, oo lagu daro kiiska injineernimada dhabta ah ee tikniyoolajiyadda la xiriirta ayaa ku qaadatay sharraxaad faahfaahsan Ugu dambayntii, qaybta isdhexgalka ee goobta, Dr. Gao wuxuu uga jawaabey su'aalaha ay weydiiyeen shaqaalaha Waaxda Suuqgeynta iyo waaxda farsamada mid mid, isagoo siinaya fikrado wax ku ool u ah furaha iyo dhibaatooyinka adag ee soo food saaray shaqaalaha suuq-geynta iyo adeegga farsamada. goobta mashruuca.
Tababarkan, shaqaaluhu waxay sheegeen inay wax badan ka faa'iideysteen: shaqaalaha farsamada ee shirkadda iyo shaqaalaha iibka waxay si fiican u barteen astaamaha khamriga hooyada polycarboxylate iyo qalabkeeda shaqeynaya iyo sidoo kale aqoonta afkaarta iyo xirfadaha hawlgalka ee teknolojiyada xakamaynta, iyo sidoo kale taageerada afka ah ee shirkadda ee ku saabsan isticmaalka tikniyoolajiyadda lagu daro iyo adeegga iibka kadib.
"Raadso isbeddelka guud, dhis aasaas adag oo guuleysta mustaqbalka". Aasaaska weyn wuxuu keenaa siyaasado wanaagsan oo loogu talagalay shirkadaha, laakiin shirkaddu waxay sii ahaan kartaa mid aan laga adkaan karin haddii ay ku dhaqanto xirfadaha gudaha ee kooxda, si joogto ah u xurmeyso badeecadaha, hagaajiso heerka adeegga, iyo la kulanka baahida macaamiisha. Ma dhammaado barashada iyo halganka, laakiin samee waxyaabo wanaagsan, ha weydiin mustaqbalka, mustaqbalka shirkadda gao Qiang waa la filan karaa!
Waqtiga boostada: Sep-21-2020